Best Agriculture Greenhouse, Commerce griin haus Manufacturers | Shengqiang
Mee ka ị nwee obi ụtọ na ntụgharị ihu igwe zuru oke ọrụ ubi griin haus.
Plastics Ihe Greenhouse
Polycarbonate mpempe akwụkwọ griin haus
Light Deprivation Green haus
Shengeqiang griin haus na-eme ka ị nwee obi ụtọ na Turney Turney Otu ọrụ
Ndị na-eweta ihe ọrụ ubi griin haus ọrụ ugbo ọrụ ugbo na-arụ ọrụ ugbo na-ahụ maka ahụmịhe 18 + afọ iri asatọ.
Ngosipụta griin haus
Ubi Ubi Greenhouse bu usoro iku nkpuru ahihia na akwukwo nri na gburugburu ulo akwukwo ahihia. Shengeqiang griin haus griin haus griin haus ga-enye gị ihe nkiri griin haus, griin haus, polycarbonate mpempe akwụkwọ griin haus, na griin haus.
Professional plastic film griin haus maka mgbochi oge akwukwo nri cultivation
Ọtụtụ uji na-acha uhie uhie-erti na culturation NK tomato, akWortwa NRI, nchịkọta ọdịnala na okook. O nwere ike na nke ọma, mmiri na mbụ, na-ebulide On wee na-embuga On we. Ọ dị mbụ na iweta ngalaba ahụ ma ọ bụ laghachi, na-ey-eynhae Mmekwa Ndoko na MKPA.
Ọnụ ọgụgụ nke ugbo-nri
COMID COMID COMIDO COMID COMIDO COLIDE Greenhouses Single-Span GreenhousesOtu mkpụrụ osisi gristi canniosis na-eji nke ọma na-ekpo ọkụ na fim atọ n'ígwé maka ihe mkpuchi. Ihe owuwu etiti dị mfe, ọnụ ahịa dị ọnụ ala ma dị mfe iji wụnye.
China venlo agriculture multi-span hydroponic PC mpempe akwụkwọ griin haus
A na-ahọrọ ụdị griin haus nke polycarbonate dị ka ụdị Venlo, na-eji ọtụtụ ụlọ elu, nke nwere ọdịdị nke oge a, nke kwụsiri ike, ọdịdị mara mma, nsụgharị dị mma, arụmọrụ mkpuchi ọkụ dị ịrịba ama, ọnụego nnyefe ọkụ na-agafe agafe, ọtụtụ mmiri ozuzo, nnukwu oge. , olu drainage, ike iguzogide ifufe siri ike, nke kwesịrị ekwesị maka mpaghara oke ifufe na mmiri ozuzo. Ihe odide 1.Greenhouse nakweere na dum ígwè keels dị ka ịgụ na nke na-arụ ọrụ ndụ ihe karịrị afọ 15.PC mpempe akwụkwọ ndụ bụ dịkarịa ala afọ 10. 2.Strong ifufe / snow ibu eguzogide. 3. Bolted ụdị kpuchie, mfe iji wụnye. 4.Multi-adịru imewe whit nnukwu ime ohere. O nwere ike ịnye oke ojiji nke ala ahụ ma bụrụ ezigbo nhọrọ maka oke ọkụ na ọrụ ọrụ.
Ego na inogide PC griin haus na ventilashion akụrụngwa
A na-ahọrọ ụdị griin haus nke polycarbonate dị ka ụdị Venlo, na-eji ọtụtụ ụlọ elu, nke nwere ọdịdị nke oge a, nke kwụsiri ike, ọdịdị mara mma, nsụgharị dị mma, arụmọrụ mkpuchi ọkụ dị ịrịba ama, ọnụego nnyefe ọkụ na-agafe agafe, ọtụtụ mmiri ozuzo, nnukwu oge. , olu drainage, ike iguzogide ifufe siri ike, nke kwesịrị ekwesị maka mpaghara oke ifufe na mmiri ozuzo. Ihe odide 1. Greenhouse nakweere na dum ígwè keels dị ka ịgụ na nke na-arụ ọrụ ndụ ihe karịrị afọ 15.PC mpempe akwụkwọ ndụ dịkarịa ala afọ 10. 2. Ike ikuku siri ike / snow na-eguzogide ya. 3. Bolted ụdị kpuchie, mfe iji wụnye. 4. Multi-adịru imewe whit nnukwu ime ohere. Ọ nwere ike ịnye oke ojiji nke ala ahụ ma bụrụ ezigbo nhọrọ maka oke ọkụkụ na ọrụ ọrụ.
Qininzhou Shenguangqiang griin hausering teknụzụ Co.ltd. Mgbaso na nkà ihe ọmụma azụmahịa nke "ịdị mma mbụ, onye ahịa mbụ".
Isi Ngwaahịa: Polycarbonate mpempe akwụkwọ griin haus, iko griin haus, multi-adịru film griin haus, ifuru griin haus, hydroponic cultivation griin haus, anụ ụlọ ugbo griin haus, agriculture griin haus, azụmahịa griin haus, seeding griin haus, otu na-adịru film griin haus, n'ubi ezinụlọ griin haus, griin haus usoro na ngwa.
Ihe nkiri griin haustobere na kọfị kọfị nke ọrụ na Kuwait
Ihe nkiri griin haustobere na kọfị kọfị nke ọrụ na KuwaitNdị na - emepụta griin haus China: Daalụ maka ntụkwasị obi ndị ahịa anyị. Anyị malitere ịmị mkpụrụ griin haus na Kuwait. Ị nwere ike nweta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị oke mma na ọnụahịa asọmpi
1. Mmepụta ụlọ ọrụ griin haus na-eme ka ihe karịrị afọ iri, nwere ọtụtụ mmepụta na teknụzụ.
2. Mmepụta ụlọ ọrụ ubi anyị nwere ọrụ ubi nwere atụmatụ ọrụ, owuwu na ikike nlekọta nlekọta, iji nye ndị ahịa ahụmịhe nke ọma.
3. Ọfịs anyị dị ka mkpa nke ndị ahịa si chepụta ihe omume kachasị mma, na arụghị ọrụ nke ezigbo mma maka ndị ahịa iji chekwaa ụgwọ ma mụbaa arụmọrụ ndị ahịa.
4. Mmepụta ụlọ ọrụ griin hauscancial na-enye akwụkwọ ikike afọ otu afọ. Mgbe oge akwụkwọ ikike ahụ gasịrị, anyị ka ga-abụ ụgwọ kachasị mma iji nye dochie ngwa griin haus.
Kpọtụrụ anyị nweta atụmatụ efu
Maka ọtụtụ ọrụ ubi griin haus na azụmahịa na-agba akwụkwọ ndụ nke ajụjụ, na-anabata ịjụ anyị ajụjụ.